यही हो चार नेपाली निल्ने चट्टान | Suvadin !
यही हो चार नेपाली निल्ने चट्टान
nepali youth death
भारत, हिमाञ्चल प्रदेशको सिमला नजिक भएको उक्त कहालीलाग्दो दुर्घटनामा मृत्यु भएका यी चारै जनाको शव त्यहाँको प्रहरीले डोजर लगाएर बल्ल निकालेको छ। शोक र पीडामा डुबेका आफन्तहरूले भने अझै शव पाइनसकेको जनाएका छन्।
Jan 07, 2017 13:47
कञ्चनपुर, पुस २३
स्वेदशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यताले विदेशीने नेपाली धेरै छन्। त्यसमा पनि पश्चिम नेपालका अधिकांश युवाको नजिकको परम्परागत गन्तव्य हो, भारत।
हातमुख जोर्नकै लागि त्यहाँको हिमाली क्षेत्रमा भारतीय सेनाको रसदपानी बोक्नेदेखि कडा चट्टाने भीर फोर्ने सम्मका जोखिमयुक्त काममा नेपाली युवा संलग्न छन्। उनीहरू ज्यानकै पर्वाह नगरेर यसरी दिनरात पसिना बगाइरहेका हुन्छन्।
यस्तै, काममा संलग्न थिए, कञ्चनपुर, झलारीका लोकेन्द्र विष्ट र दीपेन्द्र विष्ट, कैलाली सुखडका अजबबहादुर विष्ट तथा बैतडीका रामबहादुर बम। तर, कस्तो नियति! चारदिनअघि सडक खन्दै गर्दा चट्टानी पहिरोले पुरिएर उनीहरूको जीवनलिला समाप्त भयो।
भारतीय प्रहरीले डोजरको सहायताले शव निकाल्दै गरेको यो तस्विर एक जना पत्रकारले फेसबुकमा सेयर गरेका हुन्। ‘एमाले लगायत ९ बिपक्षी दलले काठमाडाैंमा राष्ट्रियताको मौसमी नारा घन्काइरहँदा बाध्यताले विदेशीएका नेपालीको यस्तो नियति’ भन्दै ती पत्रकारले प्रश्न उठाउन खोजेका छन्। मृतकका परिवार शव बुझ्न सिमला गइसकेको र आजभोलिमै उनीहरुको दाहसंस्कार हुने ती पत्रकारले बताए।